ခရီးသည်စွမ်းရည် Bursaray 460 တထောင်ကို exit ပါလိမ့်မယ် - rayhab ဖြစ်ပါသည်
HomeတူရကီMarmara ဒေသကြီး16 Bursa460 တထောင် Exit ဖို့ခရီးသည်စွမ်းဆောင်ရည် Bursaray
12 / 09 / 2019 Levent Elmastaş 16 Bursa, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, အလင်းကိုရထားပို့ဆောင်ရေးစနစ် (LRT), မြို့ပြရထားစနစ်များ, ခေါင်းစီးသတင်း, Marmara ဒေသကြီး, တူရကီ 0
အဆိုပါ BursaRay အတွက်အချက်ပြကြာရှည်ခံထားတဲ့ Calismalari
Bursa တဲ့ Metropolitan မြို့တော်ဝန် Alinur Aktas, စနစ်အညီဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသော optimization အလုပ်အချက်ပြရထားလမ်း၏မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး, ကထပ်မံသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏နှစ်သိမ့်တိုးမြှင့်မည်ဟုဆိုသည်။
Bursa တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်အတွက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမှအစွန်းရောက်ဖြေရှင်းချက်၏လက်မှတ် assign, ကလျှင်မြန်စွာတည်ဆဲမီးရထားလိုင်းအလုပ်အတူလုပ်နိုင်စွမ်းရည် optimization ပစ်မှတ် signal ကိုတိုးမြှင့်ဖို့ရောက်နေပါတယ်။ တစ်ရက်မြေအောက်လေ့လာရေးခရီးများ၏နှောင့်အယှက်မှကာကွယ်ရန်, 280 တထောင်တထောင်ကနေ 460 မှခရီးသည်စွမ်းရည်တိုးမြှင့်ဖို့ရည်ရွယ် Bursaray လှုပ်ရှားမှုများညဉ့်နာရီကနေနံနက်ယံ၌နေထွက်ချိန်အထိကြာရှည်ခံသည်။
ခရီးသည်စွမ်းရည် 60 ရာခိုင်နှုန်းခန့်တိုးမြှင့်နေသည်
Bursa တဲ့ Metropolitan မြို့တော်ဝန် Alinur Aktas, မြို့အတွက်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, အလုပ် Osmangazi ဘူတာမှာတွေ့ရှိပိုအဆင်ပြေ, Bursaray စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဖြစ်လာရန်ရည်ရွယ်ချက်နှင့်အတူမပြတ်မတောက်ဆက်လက်ဟု။ ဘယ်သူအတွက်နိုင်ငံသားများနှင့်အတူ chat သမ္မတ Aktas ပဒေသာရထားလမ်းသူတို့သယ်ဆောင်ရန်ရည်ရွယ်ထားတည်ဆဲလိုင်းများ၏ optimization အတွက် 60 ရာခိုင်နှုန်းပိုခရီးသည်အချက်ပြဟုဆိုသည်။
နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန် Aktas သူတစ်ဦးအချက်ပြစနစ်ဖြင့် 3,5 မိနစ်လက်ရှိအချိန်တွင်အသုံးပြုသောကားများအတွက်လေ့လာမှု, "Bursaray ၏အရေးပါသောအဆင့်အထိရောက်ရှိခဲ့သည်, ဒါမှမဟုတ်ပင်ပေးထားနိုင်ပါတယ်ဟုပြောသည်။ ဤသည်ခရီးသည်များ၏ထောင်ပေါင်းများစွာကြားတွင်နေ့စဉ် 280 300 တထောင်ပို့ဆောင်ကြောင်းပြသထားတယ်။ Arabayatağıတက္ကသိုလ်များအကြားအပြေး, စီမံကိန်းကိုအချက်ပြ။ ဤရွေ့ကားလိုင်းများအချိန်အတွက်မြေအောက်လှုပ်ရှားမှုများမှာခရီးသည်စွမ်းရည် 3.5 ရာခိုင်နှုန်းခန့်တိုးမြှင့်မည်ကိုတူညီပစ္စည်းကိရိယာများဒါကြောင့်, ထို260 မိနစ်ကနေမိနစ်လျှော့ချခြင်းကိုခံရလိမ့်မယ် "ဟုသူကပြောသည်။
အရှင် Aktas 460 န်းကျင်စီးရညွှန်ပြစွမ်းရည်တင်ဆောင်လာသောနေ့စဉ်ခရီးသည်များ၏ Bursaray, 2018 စီမံကိန်းအတွက်တင်ဒါရဲ့အဆုံးမှာပြုသောအမှုများနှင့်အလုပ်လျင်မြန်စွာစတင်ခဲ့ကြောင်းမှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ Aktas နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကဒီလိုင်းအတွက်အချက်ပြ ", ထိုစွမ်းအင်စီမံကိန်းအတွက်နှုန်း 108 သန်း၏တန်ဖိုးကိုအလေးပေး, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများထိုကဲ့သို့သောကတ်ကြေးနှင့်ထရန်စဖော်မာအဖြစ်ပစ္စည်းများရှိသည်။3စုစုပေါင်းစီမံကိန်းကိုအဆင့်သုံးဆင့်ပါဝင်ပါသည်။ ပထမအဆင့်ဇွန်လတွင်စတင်ခဲ့ပြီး 2020, တတိယနှင့်နောက်ဆုံးအဆင့်တွင်ဇူလိုင်လ 2020 အတွက်အဆုံးသတ်မည်စက်တင်ဘာလအဆုံးသတ် 2021 ဒုတိယအဆင့်, အဆုံးသတ်ရေး။ အလုပ်၏အကောင်းဆုံးဥပမာပြခဲ့သည်။ နေ့ခင်းဘက်စနစ်ကရပ်တန့်ဘယ်တော့မှထိုအပလီကေးရှင်းမြေအောက်ရထား၏စစ်ဆင်ရေးလုပ်ခဲ့ကြသည်အခါ, ကယ်ဆယ်ရေးဝန်ထမ်းများအား 1 နှင့်6နံနက်နာရီအကြားညဥ့်အလုပ်လုပ်ခဲ့ "ဟု၎င်းကပြောသည်။
Bursaray နှင့်ဘီးတပ်ယာဉ်များနှင့်အတူ, Bursa သမ္မတ Aktas 1 သန်းခရီးသည်နှင့်အတူလက်ရှိစနစ်ကတစ်နေ့လျှင်ပို့ဆောင်ပြောသည်, ဒီအချိုးတိုးတက်စေရန်လုပ်ကိုင်ဖို့ဆက်လက်ထုတ်ဖော်ပြောဆို။
အဆိုပါ Erciyes နှင်းလျှောစီးစင်တာများ၏အိပ်ရာစွမ်းရည်တစ်ဦးအစိုင်အခဲ 10 ဖွစျလိမျ့မညျ 12 / 06 / 2014 အဆိုပါ Erciyes နှင်းလျှောစီးစင်တာများ၏အိပ်ရာစွမ်းရည် 10 နှစ်ဆလိမ့်မယ်: အိပ်ရာစွမ်းရည်နှင့်အတူ Erciyes နှင်းလျှောစီး Center ကတည်ရှိဟိုတယ်အဆိုပါ 6006တထောင်ကနေလာကြလိမ့်မည်အကြားတူရကီရဲ့အရေးအပါဆုံးခရီးသွားလုပ်ငန်းစင်တာများဝန်ဆောင်မှုထည့်သွင်းပါလိမ့်မယ်။ ဒါရိုက်တာ Murat Cahid Cıngı၏ Kayseri တဲ့ Metropolitan မြို့တော်ဝန် Erciyes Inc ကိုဘုတ်အဖွဲ့, AA ကိုသူတို့ 2005 ဆောင်းရာသီနှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းစင်တာမှစီမံကိန်းစတင်, သတင်းထောက်တွေကိုကြေညာချက်ထဲမှာ Erciyes ဆိုပါတယ်တောင် Erciyes သူတို့လုပ်နေတာသိသာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှပြောခဲ့သည်။ လုံးဝသူတို့တီထွင်ခြင်းနှင့် 21 ဟိုတယ်ကြောင်းရေကန် Lodge ကျေးရွာစီမံကိန်းတဝိုက် Kayseri တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ် mullet ၏နေရာထိုင်ခင်းပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်ခြင်းငှါ, superstructure Cıngıတည်ဆောက်ရန်စတင်ကြောင်းညွှန်ပြတောင်တော်၏အခြေခံအဆောက်အအုံပြဿနာတွေဖြေရှင်းနိုင်ပြီးနောက် ...
Izmir မီထရိုလိုင်းအရှည် 14 ကီလိုမီတာ။ ယင်းအတွက် 75 173 ကနေခရီးသည်အရေအတွက်ကတထောင်ထောင်, ဖြစ်ခဲ့သည် 29 / 03 / 2012 ဘေးကင်းလုံခြုံခြင်းနှင့်အစာရှောင်ခြင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပေး, ခေတ်ပေါ်, အဆင်ပြေ, မက်ထရိုİzmirlilerချစ်ပြီးပထမဦးဆုံးသောနေ့ ရက်မှစ. နှုတ်ဆက်ပြီး။ ခရီးသည်များ၏အရေအတွက်အများဆုံးကွန်ကရစ်စကားရပ်တစ်ဦးချင်းစီဖြတ်သန်းတစ်ရက်နှင့်အတူတိုးပွားလာခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့်နှစ်ပေါင်းများစွာအကြား 2008 2011, İzmir Metro ၏ 80 ရာခိုင်နှုန်းကိုနှစ်စဉ်ခရီးသည်အရေအတွက်ကိုတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ 2001 75 များတွင်ခရီးသည်များ၏ပျမ်းမျှနေ့စဉ်အရေအတွက်သည်ယနေ့တိုင်အောင်အစီးနှင့်အသစ်သောဘူတာရုံ၏ပထမနှစ်ရက်အတွက်ဒီနံပါတ်ကို 160 တထောင်နေ့စဉ် 173 တထောင်ရောက်ရှိခရီးသည်ရွေ့လျားစတင်ခဲ့သည်။ စဉ် Metro ၏ကီလိုမီတာကိုလည်းနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကြောင်းခြံတိုးပြသခဲ့သည်လေ့။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, အဲဒါကိုလည်းအချိန်အကြိမ်ရေတိုးပွါး ...
အဆိုပါ 12 150 İZBANတစ်ထောင်တစ်ထောင်အကျိုးစီးပွားကနေခရီးသည်အရေအတွက်ခဲ့သည် 05 / 04 / 2012 ခက်İZBANမှ General Manager Selcuk နှင့်ဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာ Sonmez Alev, နှစ်နှစ်အတွင်းဘင် 300 ကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေနဲ့ Flame ၏ 1,5 နှစ်ပေါင်းဖော်ပြနေ့စဉ်ခရီးသည်söyledi.yaklaşık၏နံပါတ်ဖယ်ရှားပစ်ရန်ကြောင့်ပစ်မှတ်ထား, အတိတ် izban, ပစ္စုပ္ပန်နှင့်အနာဂတ်အကြောင်းကိုပြောခဲ့တယ်။ ခက်၏İZBANမှ General Manager, "မီးရထားနှင့်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး, ထိုကဲ့သို့သောanice စီမံကိန်းကိုတူသောနှစ်ခုထင်ပေါ်ကျော်ကြားအဖွဲ့အစည်းများစုဝေးရောက်လာကြ၏ကိုဖန်တီးရန်သူတို့၏အလားအလာမှကျေးဇူးတင်စကားပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ ပထမဦးဆုံးဒီလေးစားမှုအတွက်တူရကီတွင်ကျင်းပခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့သောမိတ်ဖက်၏စည်းကမ်းချက်များ၌ဗဟိုအစိုးရနှင့်တူရကီနှင့်အတူဒေသန္တရအစိုးရပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုလိုအပ်ကြောင်းအတွက်အလေးအနက်ထားခဲ့ကြပြီးဘုံမော်ဒယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ "သူကဆိုသည်။ İZBANသာ 18 လအတွင်း ...
နေ့စဉ်သယ်ယူပို့ဆောင်ခရီးသည်အရေအတွက်ကိုအတွက် 130 တထောင်ခုနှစ်တွင် KAYSERAY 09 / 10 / 2014 တစ်နေ့လျှင်သယ်ဆောင်ခရီးသည်အရေအတွက်ကိုအတွက် 130 တထောင်ခုနှစ်တွင် KAYSERAY: Kayseri မြို့တော်ဝန် Mehmet Özhaseki "ပြည်သူ့အလေ့အထများရထားလမ်းစနစ်ကတိုးမြှင့်ဖို့စတင်ခဲ့ပါသည်။ ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးပြီးတော့ 29-30 50 အတွက်တထောင်တထောင်ခရီးသည်စတင်ခဲ့သည့်အခါကျွန်တော်ခရီးသည်အရေအတွက်ကတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ သို့သျောယခုခရီးသည်အရေအတွက်ကို 130 တထောင်တက်သွားလေ၏ယူသွား "ဟု၎င်းကပြောသည်။ နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်Özhaseki, "ကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဆုံး 22 မော်တော်ယာဉ်လေလံဝယ်ယူခဲ့သည်။ ထိုအခါမှသာဒီနံပါတ်ကိုပိုပြီး 16 tools တွေအထိတိုးတက်လာပါလိမ့်မယ်ရယူပါ။ ကျွန်တော်ရပ်တန့်နှင့်ကျွန်တော်ငံ့လင့်လျက်မတိုင်မီအတိုင်းဖြစ်လေ၏သောကမ်ဘာပျေါတှငျဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှု။ ငါတို့သည်ဤလောကအတွက်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုနောက်တော်သို့လိုက်ကြပြီ။ 8-10 ကုမ္ပဏီတဦးတည်းရထားလမ်း system ထဲကနေထုတ်လုပ်မှုစတင်ခဲ့သည်။ ဒီအစှနျးရောယှဉ်ပြိုင်မှုစတင်ကြောင့်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့အလွန်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စျေးနှုန်းများ ...
İZBAN: 18 လ, ခရီးသည်အရေအတွက် 12 150 တထောင်တထောင်ကနေဆွဲထုတ်။ 08 / 03 / 2012 မီးရထားနှင့် Izmir ခရီးသွားလက်မှတ်စနစ်၏မြို့တော်မြူနီစီပယ်ထိုကဲ့သို့သောအချိန်တိုအတွင်း 18 12 အတွက်တထောင်လအတွင်း 150 တထောင်၏စွမ်းရည်တင်ဆောင်လာသောနေ့စဉ်ခရီးသည်ခဲ့, (İZBAN) ဘုံဖြစ်ပါတယ်။ ခက်İZBANမှ General Manager Selcuk နှင့်ဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာ Sonmez Alev, နှစ်နှစ်အတွင်းဘင် 300 ကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေနဲ့ Flame ၏ 1,5 နှစ်ပေါင်းဖော်ပြနေ့စဉ်ခရီးသည်söyledi.yaklaşık၏နံပါတ်ဖယ်ရှားပစ်ရန်ကြောင့်ပစ်မှတ်ထား, အတိတ် izban, ပစ္စုပ္ပန်နှင့်အနာဂတ်အကြောင်းကိုပြောခဲ့တယ်။ ခက်၏İZBANမှ General Manager, "မီးရထားနှင့်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး, ထိုကဲ့သို့သောanice စီမံကိန်းကိုတူသောနှစ်ခုထင်ပေါ်ကျော်ကြားအဖွဲ့အစည်းများစုဝေးရောက်လာကြ၏ကိုဖန်တီးရန်သူတို့၏အလားအလာမှကျေးဇူးတင်စကားပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ ဒီအသိတစ်ဦးအတွက်တူရကီ ...
Bursaray Osmangazi ဘူတာ
ဘတ်စ်ကားဒရိုင်ဘာ '' Professional ကဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ '' သင်တန်း၏အကယ်ဒမီSAMULAŞ!
အဆိုပါ Erciyes နှင်းလျှောစီးစင်တာများ၏အိပ်ရာစွမ်းရည်တစ်ဦးအစိုင်အခဲ 10 ဖွစျလိမျ့မညျ
Izmir မီထရိုလိုင်းအရှည် 14 ကီလိုမီတာ။ ယင်းအတွက် 75 173 ကနေခရီးသည်အရေအတွက်ကတထောင်ထောင်, ဖြစ်ခဲ့သည်
အဆိုပါ 12 150 İZBANတစ်ထောင်တစ်ထောင်အကျိုးစီးပွားကနေခရီးသည်အရေအတွက်ခဲ့သည်
İZBAN: 18 လ, ခရီးသည်အရေအတွက် 12 150 တထောင်တထောင်ကနေဆွဲထုတ်။
စွမ်းရည်မြှင့်တင်ဆောင်ရထားလမ်းခရီးသည် Izmir အတွက် 50 ရာခိုင်နှုန်းသာလျှင်အဘယ်အကျိုးကိုရကြလိမ့်မည်
Afyon အတွက် TCDD ရဲ့နှစ်စဉ်ခရီးသည်စွမ်းရည် 1 သန်း
အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက် Diyarbakir ခရီးသည် 25 ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်လျက်ရှိသည်
တိုးမြှင့်ခရီးသည်စွမ်းဆောင်ရည်BAŞKENTRAYအဆိုပါ 50 ရာခိုင်နှုန်းကို
အဆိုပါ 50 ရာခိုင်နှုန်းကိုBaşkentraတိုးမြှင့်ခရီးသည်စွမ်းဆောင်ရည်